Safiirka Midowga Afrika ee Mareykanka Dr. Arikana Chihombori-Quao ayaa ku boorisay Beelaha Qurbaha inay midoobaan - Amjambo Africa
Safiirka Midowga Afrika ee Mareykanka Dr. Arikana Chihombori-Quao ayaa ku boorisay Beelaha Qurbaha inay midoobaan
Danjiraha Midowga Afrika ee U.S. Dr. Arikana Chihombori-Quao, ayaa yiri ” Afrika hurdadii waynayd way ka kacaysaa hadda.” Munaasabadan ayaa ahayd mid ay soo qaban qaabisay Golaha World Affairs Council oo ku taal magaalada Portland ee gobolka Maine kaas oo uu safiirku booqasho labo maalmood ah ku yimid Maine taariikhdu markay ahayd Sebtember 12-13 iyada oo uu casuumay Pious Ali oo ah xubin ka tirsan Golaha Magaalada Portland.
“Markii ugu horreeysay waxaan kula kulmay HE Arikana Chihombori-Quao shirka sanadlaha ah ee hoggaamiyeyaasha cusub ee Mareeykanka bishii Diseembar, 2018. Waxaan had iyo jeer doonayay in aan isu keeno jaaliyadaha Afrikaanka qurbaha ee ku nool Maine si loo dhiso bulsho, waxaanan raadinayay fursad. Maalmo aad u xiiso badan ayaa nasoo maray, ”ayuu yidhi Xildhibaan Cali.
Marti sharaf aad u tiro badan ayaa ka soo qeyb galay munaasabadda ay soo qaban qaabiyeen Golaha Caalamiga ah ee Maine, kuwaasoo ay ka mid yihiin Wakiilka Rachel Talbot Ross, xubnaha golaha Magaalada Portland Pious Ali iyo Jill Duson, xubinta golaha Magaalada South Portland Deqa Dhalac, iyo Wasiirkii hore ee Howlaha Guud iyo Dib-u-dhiska Soomaaliya, Eng. Nadifa Cusmaan.
Ka dib hadalkii soo dhaweynta ahaa kaas oo uu jeediyay agaasimaha fulinta, Kate McCarthy oo kasocota Golaha Arimaha Dunida, xildhibaan Ali wuxuu ku soo dhaweeyay Danjire Arikana Chihombori-Quao furaha Magaalada Portland. xildhibaanka Magaalada Portland Jill Duson ayaa iyaduna aqrisay bayaan ka yimid Strimling kaasoo ah Duqa Magaalada, isagoo ku dhawaaqay Sebtember 2019 inay tahay Bisha Dhaxalka Afrika ee Portland.
Dr. Arikana Chihombori-Quao booqashadeedu waxay ahayd mid mashquul ah. Kulankii Khamiista waxaa loogu talagalay in ay uga hadasho wada-shaqeynta suurtagalka ah ee Jaamacadda Maine, Jaamacadda Koonfurta Maine, Thornton Academy, La-tashiga Global Tides, iyo Idexx. HE Arikana Chihombori-Quao ayaa Fiidnimadii khamiista waxay la wadaagtay cunno iyo wada sheekeysi, dadka Afrikaanka ah ee Qurba-joogta ah iyo Afrikaan Mareykanka.
Xildhibaan Cali wuxuu xusey in isu imaatinka, kaas oo isu keenay dad asal ahaan kasoo jeeda Afrika oo waahore qasab lagu keenay iyo soogalootiga Afrikaanka ah ee dhowaan imaaday, uusan ahayn kulan marwalba kadhaca gobolka Maine, halkaas oo labada bulsho ay si isdaba joog ah iskugu dhex milmayaan. Wuxuu rajo ka muujiyay in kulanku uusan sii ahaan doonin mid gaar ah. Jimcihii, HE Arikana Chihombori-Quao waxay booqatay Dugsiga Sare ee Deering.
Habeenimadii Jimcaha, kadib tilmaamid, dulmar guud oo ku saabsan taariikhda gumeysiga Afrika, iyo sii wadista ka faa’iideysiga kheyraadkeeda dabiiciga ah ee shirkadaha caalamiga iyo dowladaha shisheeye ilaa maantadan, Safiirku wuxuu kaloo tilmaamay isbadelka taagan.
“Kadib uur dheer, iyo sanado badan oo foolasho ah, cunug ayaa ugu dambeyntii dhashay, kaasoo magaciisu yahay Heshiiska Ganacsiga Xorta ee Afrika (AfCFTA). Waxaan u baahanahay inaan si taxaddar leh kor ugu qaadno, oo aan ka caawino sidii ay u kori lahayd oo ay u weynaan lahayd. Dhamaan 55ka dal ee kuyaala qaarada afrika ayaa iskugu yimid heshiiska, kaas oo ay jabisay midowga afrika, laga soo bilaabo 2013, laguna ansaxiyay bishii marso ee ina soo dhaaftay 2018. Waxaan ugu dambeyntii ku wada hadlaynaa hal cod. Waa go’aankii u yaabka badnaa ee aan ubaahnayn inaanu sameyno in kabadan 700 oo sano, tan iyo markii gumaystayaashii ugu horeeyey ay yimaadeen Afrika. Waxaa midawga loosameeyay si Afrika ay boos uga hesho masraxa adduunka. Laga bilaabo Julaay 2020, Afrika waxay gali doontaa suuqa adduunka iyadoo ah hal ‘Afrika’ halkii ay ka ahaan lahayd 55 dal. ”
Dr. Arikana Chihombori-Quao ayaa sheegtay in AfCFTA uu yahay mid wax ka beddelaya ciyaarta. Heshiiska taariikhiga ahi wuxuu u saamaxayaa waddamada Afrika inay la tartamaan dhaqaalaha wadamada gobolka ee weyn – kaasoo dalalku kali ahaan awoodi waayeen inay latartamaan. sababtoo ah tiradooda oo yar, iyo dhaqaalahooda ooyar. Heshiiska Ganacsiga Xorta ah ee Qaaradda Afrika wuxuu u oggolaanayaa shaqaalaha Afrikaanka ah inay ka shaqeeyaan meelkastoo ay doonayaan qaaradda; haday noqoto gudbinta alaabta xuduudaha qaramada iyadoon la daahin; in lafuro safar dalxiis iyo ganacsi oo qaaradda dhexdeeda ah.
Xilligan la joogo, waddamada Afrika waa kuwa raba inay noqdaan feeryahan ladhexgeeyo goobta lagu feertamo miisaanka culus. Galbeedka Afrika waxay soo saartaa boqolkiiba 65% adduunka kaabashka, tusaale ahaan, laakiin sanadkii la soo dhaafay kaliya waxay bilaabeen inay soosaaraan kartoomada shukulaatada u gaarka ah. Dadku waxay si sax ah uga hadlaan musuqmaasuqa qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha Afrika, laakiin haddii aan ka hadlayno musuqmaasuqa – aan ka hadalno dhammaan musuqmaasuqa. Ugu yaraan $ 50 bilyan ayaa sanad walba Afrika kulumma musuqmaasuqa. ”
Afrika waa inay ka baxdaa haadka lumay. Waxaan u baahanahay inaannu isu nimaadno sidii Afrikaan ahaan, iyo saaxiibbada Afrika, oo aan iyada ka fahamno waxa dhabta ah, aan ahayn beensheegga. ”
Danjiraha ayaa ku booriyay bulshada ganacsatada Mareykanka inay lajaan qaadaan Heshiiska Ganacsiga Xorta ah ee Afrika.
“Reer Yurub waa diyaar, Shiinaha waa diyaar- dadka aan diyaarka aheyn waa Mareykanka. Meelkasta oo aan tago, bulshada ganacsatada Mareykanka kama warqabto AfCTFA. ”
Subaxnimadii Sabtida, markii ay ku sii jeedday Portland Jetport iyadoo ku noqonaysa Washington, DC, Dr. Arikana Chihombori-Quao waxay la wadaagtay dhowr fikradood .. Waxay ka shaqeyneysaa abaabulidda Qurba-joogta Afrika – oo ay kujiraan Afrikaan Mareykan ka ah – si ay gacan uga geysato dhismaha awooda Afrika. Xog ururin ayaa la bilaabi doonaa bisha Oktoobar xubnaha ka tirsan Qurba-joogta Afrika si ay u diiwaan geliyaan magacyadooda, iyo xirfadahooda, safiirka wuxuu ku booriyay jaaliyadaha qurbaha ee afrika inay is abaabulaan si’ay uga qayb qaataan marka la bilaabo. Waxay xustay in cutubyo qurbo-joog oo Afrikaan ah ay ka fureen Florida, New York, Minnesota, Texas, iyo North Carolina, waxayna ka hadashay muhiimadda ay leedahay mideynta qurbo-jooggta Afrikaanka iyo ka gudubka taariikhda dheer ee addoonsiga iyo gumeysiga.
Si adag u shaqee, diiradda hal meel ku haya, oo xusuusnow in Afrika ay tahay hoygaaga. Kor u qaad qaaraddaada si kasta oo loo baahdo, sida qowmiyadaha kale ee ka soo jeeda qaybaha kale ee adduunka ee halkan Maraykanka jooga ay sameeyaan, ayay tidhi. “Waxyaabo wanaagsan ayaa ka socda Afrika.”
Farriinta midnimada ee ka timid Danjire Arikana Chihombori-Quao ayaa waxaa ku waafaqay Cabdullaahi Cali, oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya. Wuxuu yiri, “Waxaan rumeysanahay in qurbo-joogta Afrika inay door ka ciyaarayaan dhisidda Afrika casri ah oo midaysan. Qeexida Midowga Afrika ee Qurbajoogta Afrika waa mid loo wada dhan yahay oo dhiirrigelin leh – ma ahan oo keliya muhaajiriinta Afrikaanka ah ee ku nool dibadda qaaradda, laakiin qof kasta oo asalkiisu yahay Afrikaan, ha ahaado Afrikaan Mareykan, Madowga latiin, kuwa ka yimid Kariibiyaanka, ama soogalootiga Afrikaanka u dhashay. Qurba-joogtu waxay door ka ciyaari karaan dimuqraadiyadda, maalgashiga, is-dhexgalka, iyo horumarka qaaradda. ”
PreviousLaga soo bilaabo magaalada ladhoho Kennebunkport ilaa iyo Fort Kent, dadka udhashay Maine waxay soo dhaweynayaan qoysaska magangalyo-doonka ah
NextAwoodda codkeenna Yaan dooranaa Noofembar 5 si uu noo hoggaamiyo?